Tianay ny mitoraka bilaogy ... Fa ... | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 5, 2011 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Tsy misy toa ny fanatontosana azy amin'ny fihaonambe isam-paritra, nasionaly na iraisam-pirenena mihitsy aza mba hanalavirana anao amin'ny birao sy hanatsara ny fahaizanao. Mazava ho azy, tery ny tetibolan'ny dia ary mety tsy misy akory ny tetibola entina manatrika. amin'ny DK New Media, manararaotra ny fihaonambe izahay amin'ny alàlan'ny fiara lavitra… avy any Detroit mankany Chicago ka hatrany Louisville, manara-maso hatrany izahay ny amin'ny fotoana manaraka hihaonana amin'ny mpamaky anay.
Fitaovana iray izay nanjary fitaovana lehibe Lanyrd. Mahagaga i Lanyrd amin'ny fanomezana anao lisitra feno momba ny hetsika kasaina harahin'ireo olona ao amin'ny tamba-jotra! Ny tsara indrindra dia maimaim-poana! Raha mpanentana hetsika iray ianao, dia azonao atao koa ny manampy ny konferansao amin'ilay fitaovana! Ao anatin'ny volana vitsivitsy dia mikasa ny handeha amin'ny hetsika eo anelanelan'i Paris, France mankany Los Angeles, Kalifornia isika. Raha any amina hetsika ianao dia aza hadino ny mitsahatra sy mifampiresaka!
Tags: fitorahana bilaogyzava-mitrangamitady fihaonambemitadiava hetsikaKonferansa momba ny marketing
Taratasy fampidirana fiaraha-miasa miaraka amin'i LucidChart